မနေ့က Reader Channel မှာလာတဲ့ ဆရာကောင်းသန့်ရဲ့.... စာပေဟောပြောပွဲ ကို နားထောင် ဖြစ်ရင်း ဒီပို့စ်လေး ကို ရေးဖို့ ကျွန်မ စိတ်ကူးရပါတယ်...
ဆရာကောင်းသန့်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ မမှီလိုက်ပေမယ့် ကျွန်မ နားထောင်တဲ့ အချိန်မှာ ဆရာက ကလေးတွေကို ဇာတ်လမ်းလေး ၁ ပုဒ်ပြောပြနေတာ က စပီး နားထောင်ရပါတယ်..
အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ အမျိုးသမီး ၁ ယောက်က သူ့မှာ သား၂ ယောက်ရှိပါတယ် တဲ့ သူ့သားလေးတွေ က အဖေ မရှိတော့လို့ အမေကပဲ ကျွေးမွေးပြုစု စောင့်ရှောက်နေရတာပေါ့.. သူ့အမေက သူတို့ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက်.... သူများအိမ်မှာ အိမ်အကူ အလုပ်တွေ လုပ်ပီး... ကလေးတွေကို ရှာဖွေ ကျွေးမွေး နေတဲ့ သူပါ...
အမေကြီး ဟာ တစ်နေ့ကို အချိန်ပိုင်းနဲ့ အကူအလုပ်ကို ၃ ခုလောက် လုပ်ပါတယ်.... တစ်နေ့တော့ သူသွား အလုပ်လုပ်တဲ့ အိမ်က ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ မိသားစု အိမ် ဖြစ်နေပါတယ်... အိမ်ထဲမှာ အလုပ်လုပ် ရင်း သူတွေ့တာက ဗီရိုထဲမှာ စာအုပ်တွေ အများကြီးထည့်ထားတဲ့ စာအုပ် ဗီရိုတွေကို သူအများကြီးတွေ့ ပါတယ်... သူ က စဉ်းစားတာပေါ့ ဒီအိမ်မှာ စာအုပ်တွေ အများကြီး ဘာလုပ် တာလည်း ဆို ပီး သူကတော့ တွေးနေပါတယ်...
ဒီလိုနဲ့ သူက နောက် အိမ်တစ်အိမ်ကို ရောက်သွားတဲ့ အချိန်ကြတော့ အဲ့ဒီအိမ်က ခုနက ချမ်းသာတယ် ဆိုတဲ့ ပထမအိမ်ထက် ပိုချမ်းသာပီး ရေကူးကန်တွေ မြက်ခင်းစ်ိမ်းတွေ ကစား ကွင်း တွေနဲ့ တော်တေ်ာလေးကို လှပတာကို သူတွေ့ ရသတဲ့ အဲ့ဒါနဲ့ သူလည်း သူ့အလုပ်တွေ လုပ် ဖို့ အိမ် ထဲကို ရောက်တော့...ပထမအိမ်ထက် များတဲ့ စာအုပ်ဘီရိုတွေက ရယ် လှေကားနဲ့ တက်ယူလို့ ရလောက် အောင် မြင့်မားတဲ့ စာအုပ်တွေကို သူတွေ့ပြန်သတဲ့...အဲ့တော့ သူက ထပ်စဉ်းစားတယ် ပထမအိမ်မှာလည်း စာအုပ်တွေ တွေ့တယ် ခု ဒုတိယအိမ်ကလည်း စာအုပ်တွေ ကို ဒီ့ထက်တောင် များသေးတယ်ပေါ့..
နောက် သူ နောက် ၁ အိမ်လုပ် ဖို့ သူရောက်သွားပြန်တော့ ဒီအိမ်ကတော့ ပထမ ၂ အိမ်ထက် ပိုချမ်းသာတာပေါ့လေ... ပထမအိမ်တွေ ချမ်းသာတယ် ဆိုတာ သူ့ကို မမှီဘူးပေါ့ ... ဘာထပ်တွေ့ပြန်လည်း ဆိုတော့ စာအုပ်တွေ့ကို စာကြည့်ခန်းသပ်သပ် နဲ့ ထားပီး စာအုပ်စင်တွေကို တစ်ခန်းလုံး အပြည့်သူတွေ့လိုက်ရတယ် စာဖတ်ခန်းမှာ အဲကွန်းနဲ့ စားပွဲနဲ့ ကုလားထိုင်နဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လုပ်ထားတာ သူတွေ့ပြန်သတဲ့...
အမျိုးသမီးကြီးဟာ သူ စဉ်းစားသတဲ့ ချမ်းသာတဲ့ အိမ်တွေနဲ့ စာအုပ်တွေကို သူဆက်စပ် တွေးမိ ပီး သူ့ကလေးတွေကို နေ့စဉ် သူတို့မြို့က စာကြည့်တိုက်ကို ပို့ပေးပါတော့ တယ် .. ကလေးတွေက အစကတော့ စိတ်မ၀င်စားပဲ နောက် ဖတ်ရင်းကနေ စာအုပ်တွေကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားပီး စာဖတ်အားလည်း ကောင်းလာတယ်... ဗဟုသုတတွေလည်း တိုးလာခဲ့ပါတယ်...
ကလေးတွေက အရွယ်ရောက်တဲ့ အခါမှာ သား ၁ ယောက်က အင်ဂျင်နီယာ နောက် ၁ ယောက်က တော့ ဆရာ ၀န် ကြီး ဖြစ်လာတယ် တဲ့... သားတွေက သူတို့ ကို ဆင်းရဲပီး ဘာမှ ဗဟုသုတမရှိတဲ့ သူတို့ဘ၀ကို ဒီစာအုပ်တွေက သူ့အမေ ကျေးဇူးကြောင့် သူတို့ ဒီလိုဖြစ်ရတာ ပါ ဆိုပီး သူ့အမေကို... အလွန်ကျေး ဇူးတင်တာပေါ့... ဒီတော့မှ သူ့အမေကို မေးပီး ဘာလို့ သားတို့ကို စာဖတ် ဖို့ အကြံရတာလည်း ဆိုတော့ သူ့အမေက သူအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အိမ်တွေ မှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ အဲဒီ အိမ်တွေရဲ့ ချမ်းသာမှုကို သူ တွေး ပီး သူ့သားတွေကို စာကြည့်တိုက် ကို ပို့ပီး စာဖတ်ခိုင်းခဲ့တာ လို့ ပြော ပါတယ်...
ဒီ အဖြစ်အပျက်လေးကို ကြည့်ပီး ဆရာက လူငယ်တွေ စာဖတ်မယ် ဖတ် ပီး မှတ်သားစရာ ရှိတာ ကို မှတ်သားမယ် ဆိုရင် ဘ၀မှ သူတို့ရဲ့ အခြေအနေတွေက မြင့်မားလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် လို့ ပြော ပါတယ်..
ဒါကြောင့် ကိုယ့်မြို့မှာ ရှိတဲ့ စာကြည့်တိုက်တွေ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နဲ့ လက်လှမ်းမီတဲ့ ဗဟုသုတစာအုပ်တွေကို ဖတ်မယ် ဆိုရင် အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရလာမယ် ဆိုတာလေးကိုဆရာက ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ ပြောပြ သွားပါတယ်..
စာပေ နဲ့ ပတ်သက်ပီး အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ ဟောပြောချက်လေးပါ...
လူငယ်လူကြီး မရွေး စာကြည့်တိုက်မှာ ရှိတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်ရာ စာအုပ်များကို ရှာဖတ် ပီး တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း ရပါစေတယ် ဆိုတာ ကို ဆရာ့ ဟောပြော ချက်နဲ့ ပြန်လည် ဝေမျှပေးပါတယ်..
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, December 23, 2014 8 comments:
၂၀၁၄ ခုနှစ် ကုန်လို့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကို ရောက်ပါတော့မယ်
ပန်းကဗျာတို့လည်း အသက် တွေ ၁ နှစ် ပိုကြီး လာတာပေါ့
နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ် လူသစ်နဲ့.. အားလုံး ပျော်ရွှင် အေးချမ်း ဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
စိတ်သစ် လူ သစ် ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပန်းကဗျာ တွေးမိတာလေး တစ်ခုကို ဒီ ပို့စ်လေးမှာ ရေးချင်ပါတယ်...
ရက်ကို လစား လကို နှစ်စားနဲ့ ၁ နှစ် ပီး ၁ နှစ် ပြောင်း လာခဲ့ပါပီ....
အဲ့လို ပြောင်းလဲနေတဲ့ အချိန်တွေနဲ့ အတူ ပန်းကဗျာတို့ တွေ အတွက် မဖြစ် မနေ ပြောင်း လဲ လာတာ ကတော့ ရုပ်တရား တွေပါပဲ...
ရုပ်တရားတွေ ကတော့ သူ့သဘာဝ အတိုင်း အိုမင်း ရင့်ရော်မှုတွေ ပြောင်းလဲ လာမှာပါပဲ... ဒါကလည်း လူတိုင်း အတွက် မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ရမှာပါ
ဒါပေမယ့် လူတွေရဲ့ ရုပ်တွေ အိုပေမယ့် စိတ်တွေ မအိုအောင်... အမြဲတမ်း သစ်လွင် နေအောင် လုပ် ဖို့ တော့ ပန်းကဗျာတို့ လူသားတွေက ကြိုးစား လို့ရပါတယ်.
ခုခေတ်မှာ ပြောင်းလဲ တိုးတက်မှု တွေ ခေတ်မှီပစည်းတွေက အမြဲတမ်း အသစ်အဆန်းဆိုတာ ပေါ်နေတာ မို့လူတွေ အတော်များများ က အဲ့ တိုးတက်မှုတွေ နောက်ကို လိုက်နေရတာနဲ့ မော နေ ရတာ ပါပဲ
လိုက်နိုင်တဲ့ လူက လည်း လိုက်နိုင် ဖို့ အတွက် စိတ်တွေ ပင်ပန်းရပါတယ် မလိုက်နိုင်သူတွေက လည်း ဒါမျိုးတွေ မသုံးရ ပါလား ဆိုပီး စိတ်အမော တွေနဲ့ပေါ့
ဘယ်ဖက်ကပဲ ဖြစ် ဖြစ် ၂ ဖက် စလုံးက အမောတွေကြီးပါပဲ... ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအမောတွေပေါ်မှာ ကျွန်မတို့ က သင်ခန်းစာ ယူတတ်ရင် စိတ်ထားတတ်ရင် အမောတွေ ပျောက်ပီး စိတ်အေးချမ်းမှုတွေလည်း ရမှာပါ....
ခေတ်မှီပစည်းတွေနောက် လိုက်ရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လောဘတွေ တက် မရတော့လည်း ဒေါသတွေ ဖြစ် လိုက် နဲ့ အကောင်း အဆိုးမဝေဖန်နိုင်တဲ့ မောဟတွေ လည်း ပိုများ လာကြပါတယ်..
နှစ်သစ် ဆိုရင် မိတ်ဆွေ အချင်းချင်း Happy New Year လို့ ဆုတောင်း ပေးကြသလို နှစ်သစ်မှာ လူသစ် စိတ်သစ်နဲ့ ပျော်ရွင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်း ပေးကြပါတယ်...
ကပ်သီးကပ်သပ် ပြောတယ် လို့တော့ မထင်ပါနဲ့နော်... လူသစ် ဆိုတာ လူက အသစ် ဖြစ်မှာ မဟုတ် ဘူး လို့ တွေးကောင်း တွေးလို့ရပါတယ်... ဒီလိုပဲ စိတ်သစ် ဆိုတာလည်း အသစ် ဖြစ် လာဖို့ မရှိဘူး ပေါ့လေ..
အဲ့လို မဟုတ်ပါဘူး ဆုတောင်းမှာ လူသစ်/စိတ်သစ် - ဆိုလိုရင်း က မကောင်းတဲ့ စိတ်တွေကို ပယ် ကောင်းတဲ့ စိတ်တွေ ရောက်အောင် လုပ်တာမျိုး၊ အကုသိုလ်တွေ များနေရင် ကုသိုလ်တရားဘက် မှာ ပိုပီး အားစိုက် တာမျိုးတွေ၊က မိမိ လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ် ၊ အပြုအမှု အပြောအဆိုတွေ မှာ မကောင်းမှု တွေ ရှိနေရင် ပိုမို ကောင်းမွန် အောင် ကြိုးစား ပြောင်းလဲ ခြင်းတွေကို စဉ်းစား ဆင်ခြင်နိုင်မှာ တကယ့် စိတ်သစ် လူသစ်နဲ့ နေထိုင်နိုင်မှာပါ..
အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ ... အကုသိုလ်တရားတွေ မကောင်းတဲ့ စိတ် ကိုယ့်ရဲ့အမှားတွေကို မပြုပြင် နိုင်ရင်တော့ အသက် ကြီးလာတာပဲ အဖတ် တင်ပီးတော့.......... ဘယ်လိုမှ စိတ်သစ် လူသစ် ဆိုတာ မဖြစ် လာ နိုင်တဲ့ အပြင် .....စိတ်တွေ ပိုညှိုးနွမ်းရမယ်... လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ မိမိ ရဲ့ အတ တွေနဲ့ ပူလောင် ပီး ဆက်ပီး နေမယ် ဆိုရင်တေ့ာ ခဏတာ ဖြစ်ရတဲ့ လူ့လောကမှာ နေရတာ တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ လူ အဖြစ် နဲ့ နေရတာနဲ့ အတူတူပါပဲ..
နှစ် တိုင်း နှစ် တိုင်း ပန်းကဗျာတို့ က နှစ်သစ်ဆိုတာ ရှိနေတာပါ....
ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်တွေ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွင်နဲ့ နေထိုင်နိုင်အောင်.... ကြည်လင် လန်းဆန်းပီး စိတ်သစ်လူသစ် ဖြစ်နေစေဖို့.... ကောင်းမှု တရားတွေ စိတ်စေတနာကောင်းတွေနဲ့ နေထိုင်နိုင်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်း ပီး နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် ရှင်....
ရေးသားသူ poemflower at Wednesday, December 17, 20143comments:
ပို့စ်တွေ မရေးတာကြာလို့ ဧရာဝတီ ဘလော့ဂ် ပန်းကဗျာနဲ့ မေ၁၆ ကို ဘလော့ဂ်မိတ်ဆွေများ မေ့နေကြ ပြီ လား မသိပါဘူးရှင်...
ကျွန်မတို့ ဘလော့ဂ်ကို စသုံးတဲ့ အချိန် က အင်တာနက်ကလည်းကောင်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း တကယ် အရေး အသားကောင်းတဲ့ စာရေးစာရာများ ၊ဗဟုသုတ များ ကိုယ် မသိသေးတာကို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ဖတ်ခွင့်ကို အများကြီး ရခဲ့ပါတယ်။
အလိမ်မာ စာမှာ ရှိဆိုတဲ့ အတိုင်း စာပေချစ်မြတ်နိုးတဲ့ လူက လိမ်မာ ယဉ်ကျေးပီး လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သိပ် အမြင့်အမားကြီး မဟုတ်တောင် သူ့ နေရာနဲ့ သူ နေရာ ၁ ခုကို ရပ်တည် နိုင်မယ် လို့ ကျွန်မ ကတော့ ယုံကြည်မိပါတယ်...
ဟိုးအရင်ခေတ်ကတော့ စာအုပ် ဖတ်ချင်ရင်.... စာအုပ်အငှားဆိုင်၊ စာကြည့်တိုက် စတဲ့ နေရာတွေ မှာ စာသွားဖတ်ရပါတယ်. ခုခေတ်ကတော့ တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ဆိုတော့ အွန်လိုင်းကနေပီး စာအုပ်တွေကို ကြိုက်သလိုဖတ်လို့ရပါတယ်..
ဘလော့ဂ်ပေါ်က စာတွေကို လည်း ဖတ်လို့ ရသလို စာအုပ် တွေကိုဒေါင်းလုပ် လုပ်ပီး ဖတ်လို့ရနေတဲ့ ခေတ် ဆိုတော့ စာအုပ်ဆိုင်တွေ ကျွန်မတို့လို စာကြည့်တိုက်တွေ မှာ လူနည်း ပီး စာဖတ်တဲ့ သူ အန်မတန် နည်းပါးသွားပါတယ်
အင်တာနက်ကလည်း နေရာ တကာ ရ နေတာဆိုတော့ ဖုန်း က နေ တဆင့် ဖတ် လို့ ရတယ် ဆိုပမယ့် မြန်မာပြည် က အင်တာနက်လိုင်းနှေးတာရယ် ခု Social Network တွေ က အရမ်းခေတ်စားနေတော့ စာအုပ် ဘက်ကို ကြိုးစားဖတ်သူတွေကို အတွေ့ရ တကယ်နည်းပါတယ်...
ဒါက ကောင်းတဲ့ အလားအလာတော့ မဟုတ်ပါဘူး အွန်လိုင်း က သုံးတတ်ရင် တကယ် အကျိုး ရှိသလို မသုံးတတ်ရင်လည်း ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေ အများကြီး ရလာပါတယ်.... အင်တာနက်ကနေ မကောင်းတာကို အတုခိုးမြန်တဲ့ကလေးတွေ လည်း အများ ကြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့နေရပါတယ်..
စာကြည့်တိုက်အသစ်တွေ ဘယ်လောက်ဖွင့်ဖွင့် စာအုပ်ကောင်းတွေ အများကြီးထွက်လာပေမယ်... စာ ဖတ် တဲ့ ဦးရေက စာအုပ် ထွက်ရှိမှု ရဲ့၃ ချိုး ၁ ချိုးတောင် မရှိဘူး ဖြစ်နေပါတယ်.. ခုခေတ်ကလေး တွေ စာများများ ဖတ်သင့်တယ် လို့ ကျွန်မတော့ ထင်ပါတယ်.....
သူတို့ကိုယ်တိုင် အသိပညာတိုးဖို့ရော..... တိုင်းပြည် တိုးတက်ဖို့ တစ်ဖက် တစ်လမ်းက နေ ကူညီ နိုင်ဖို့ အတွက် ဆို အသိပညာ တိုးပွားစေတဲ့ စာများများ ဖတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်...
လူငယ်များအားလုံး စာဖတ်အားကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း...
ကျွန်မလည်း ဘလော့်မှာ စာမရေးဖြစ်တာ အတော်လေးကို ကြာပါပီ အပြင် အလုပ်တွေ ရှုပ်လာတာ ရော စာဖတ်သူတွေ နည်းလာတာတွေကြောင့်ပါ
မတွေ့တာကြာပီ ဖြစ်တဲ့ ဘလော့ဂ် မိတ်ဆွေများ အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပါစေ လို့
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, August 17, 20144comments:
"အသက် ၄၀ လူတွေ မေးတယ် ... ဘယ်တော့များမှ စားရမှာလည်း..."
လို့ မိုးမိုး ဆိုသော သီချင်း ကို နားထောင်ပီး ကျွန်မ ကတော့ ဘယ်တော့များမှ .......စားရမှာလည်း ဆိုတဲ့ နေရာမှာ မိမိကိုယ်မှာ ... ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ယှဉ် ပီး တရား သဘောနဲ့ ဒီလိုတွေးမိပါတယ်...
အသက် ၄၀ ထဲ စ ၀င်လာတည်း က ဖြစ်လိုက်တဲ့ ရောဂါတွေက ကြီး ကြီး ၁ မျိုး သေးသေး ၁ မျိုးနဲ့ နှိပ်စက် လာပါတယ်..
ခန္ဓာ ဒုက္ခ ဆင်းရဲခြင်းတွေက ပိုပီး ပြ လာတဲ့ ဇရာရဲ့ လက္ခဏာတွေကို လည်း တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပို မြင်လာရပါတယ် .
ဒါကြောင့် အသက် ၄၀ မှာ ကျန်းမာအောင် ဘယ်လို နေထိုင် စားသောက်ရမလည်း ဆိုတာရယ် "တရားရှာ ကိုယ်မှာတွေ့ ဆိုသလိုမျိုး " အိုလာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ ဒုက္ခကို တရားသဘောနဲ့ မိမိ ခန္ဓာကနေ ပဲ သေချာ ဆင်ခြင် မိပါတယ်.
ဒါကြောင့် အိုနာသေ ဘေးက လွတ်တဲ့ တရားကို. အိပ်ရာပေါ်မလဲခင် သေချာ ကျင့်ကြံ အားထုတ် ရမယ် ဆိုတဲ့ အတွေး ကျွန်မ စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာလို့ ဒီစာလေးကို ရေးမိပါတယ်..
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, February 22, 20143comments:
ကျေးဇူးတော်ရှင် သီတဂူဆရာတော်ကြီး၏ ၁၃၇၄ခုနှစ် တပေါင်းလပြည့် (၂၆-၃-၂၀၁၃)နေ့တွင် ကျရောက်သည့် သက်တော်(၇၆)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မင်္ဂလာ၌ တပည့်တော် ရိုသေစွာ ရှိခိုး ကန်တော့လျှက် ပူဇော်ပါသည် ဘုရား………
အထက်ပါ အဓိဌာန်အတိုင်း ဆရာတော်ကြီးသည် ”ဘ၀သမိုင်း မရိုင်းစေရန်” စာသားအတိုင်း ဘ၀သမိုင်းမရိုင်းအောင် တိုင်းပြည်နဲ့သာသနာအတွက် ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှကို လုပ်ခွင့်ရသလောက်၊ လုပ်နိုင်သလောက် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် မိမိခန္ဓာ ကျန်းမာသရွေ့ လူမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် ရေအလှူတော်များ၊ ဆေးရုံအလှူတော်များ၊ တက္ကသိုလ်အလှူတော်များ၊ ပညာရေးအလှူတော်များ၊ ကျန်းမာရေးအလှူတော်များ၊ သဘာဝဘေးဒဏ်အတွက် အလှူတော်များ စသည် စသည်အားဖြင့် ပြုလုပ်အားထုတ်ခဲ့သည်မှာ သက်တော် ၇၆ နှစ်ပင် ရှိလာပြီဖြစ်သည်။
သီတဂူဆရာတော်ကြီးသည် ဆေးရုံစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ ယခုဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်ဒေသကြီးများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးများတွင် တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်ပြီးဆေးရုံ (၂၀) ခုရှိပါသည်။ ဆရာတော်ကြီး ၏ တရာတော်များမှ ၊ တရားဓမ္မအဆုံးအများ သာမက အသိဥာဏ် ဗဟုသုတများ နာယူမှတ်သားစရာများစွာ ပါရှိပါသည်။ “သီလသည်သာ လူသားတို့၏ ဘ၀တရား”… ဟူသော ဆရာတော်ကြီး၏ တရားတော်တွင် ငါးပါးသီလစွမ်းရည်နှင့် ပတ်သက်သော ဗဟုသုတများစွာ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သီလရဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိ သီလရဲ့ .. ကိုယ်ကျင့်တရားကို စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းချင်စိတ်ပေါက် အောင်..
“လူမှာလည်း သီလလောက် တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ အ
“သီလ သည် နတ်ပြည်တက်ဖို့ စောင်းတန်း၊ သီလ မရှိရင် နတ်ပြည်တက်ဖို့ စောင်းတန်းမရှိသလိုပါပဲ”
“အထက်တန်းဘ၀ကို တက်လှမ်းဖို့ရာ လှေကားဟာ သီလပါပဲ…. သီလမရှိရင် ဘယ်လူမျိုးရဲ့ ဘယ်ဘ၀ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘ၀ အထက်တန်းကိုရောက်စရာ မရှိပါဘူး “
“သီလဆိုတာ လူသားတိုင်းရဲ့ ဘ၀ကိုမြှင့်ပေးတဲ့ ဘ၀အထက်တန်းကို ရောက်စေနိုင်တဲ့ စည်းကမ်းပါပဲ…”
“သီလဆိုတာ….ကိုယ်အမူအရာနဲ့ နှုတ်အမူအရာကို စောင့်ရှောက်တဲ့ စည်းကမ်းပါပဲ “ ဟူသော အချက်များဖြင့် သီလကို အထူး စောင့်ထိန်းရန်အတွက် တရားတော်ထဲတွင် ထည့်သွင်း ဟောကြားခဲ့ပါသည်။
နေ့စဉ် မိမိတို့ စောင့်ထိန်းနေသော…….ငါးပါးသီလ ထဲမှ ကာယကံ၊ ၀စီကံဖြင့် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်များကိုလည်း ဟောပြောညွန်ကြားခဲ့ပါသည်။
ပါဏာတိပါတာ= သူတပါး၏အသက်ကို သတ်ဖြတ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ၏(ကာယကံအား စောင့်ထိန်းခြင်း)
အဒိန္နာဒါနာ= ပိုင်ရှင်မပေးသော သူတပါးဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏)(ကာယကံအား စောင့်ထိန်းခြင်း)
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ= (ကာမဂုဏ်အမှားအယွင်းကင်းခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏)( ကာယကံအား စောင့်ထိန်းခြင်း)
မုသာဝါဒါ=( မဟုတ်မမှန် မှားမှားယွင်းယွင်း ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏) (၀စီကံ အား စောင့်ထိန်းခြင်း)
၀စီကံ ပါးစပ်ကိုထိန်း တဲ့ စည်းကမ်းကိုလည်း လိုက်နာစရာ အောက်ပါအချက်များအတိုင်း အကျယ်ချဲ့ ဟောကြားခဲ့ပါသည်။
မှန်တာပြောမယ် မှားတာမပြောဘူးဆိုတဲ့စကား နဲ့တင်မလုံလောက်ပါဘူး။
မှန်သောစကားပေမယ့် လူအချင်းချင်း ရန်ဖြစ်စေမယ့် စကားများ မပြောရပါ။
အချိန်အခါနဲ့ ပြောဆိုရပါမည်။ အရှိကို အရှိတိုင်း/ အကျိူးရှိ/မရှိ ဓမ္မနဲ့ညီ/မညီ ၊ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ပြောဆို ရပါမည်။
နားထောင်သောသူများက မှတ်သားသိမ်းဆည်းနိုင်အောင် ပြောဆိုရပါမည်။
အခိုင်အမာ ကျမ်းဂန်အကိုးအကားနှင့် ပြောဆိုရပါမည်။
အပိုင်းအခြား အကန့်အသတ်နဲ့ ပြောဆိုရပါမည်။
မိမိပြောလိုက်သော စကားတစ်လုံးကြောင့် ကြားကြသူ နားထောင်သူအပေါင်း အမှာ အသိအမှတ် များ အလွဲ၂အမှား၂ မဖြစ်အောင် ပြောဆိုရပါမည်။
လောကကြီးလမ်းလွဲကိုမရောက် အောင် ငါနှုတ်ကို စောင့်ပြီးပြောဆိုရပါမည်…………… ဟု ၀စီကံနှင့် ပတ်သက်သော မှတ်သားစရာများကို ဆုံးမခဲ့ပါသည်။
ကောင်းသောစကားကို ဆိုခြင်းသည် မင်္ဂလာတစ်ပါး ဖြစ်ပါကြောင်းကိုလည်း အထက်ပါ အချက်များဖြင့် ဟောပြောညွန်ပြခဲ့ပါသည်။
သုရာမေရယ မဇ္ဇပမာဒဋ္ဌာနာ= ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌ မေ့လျော့စေတတ်သော သေရည်သေရက်ကို သောက်သုံးခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ၏)( ကာယကံအား စောင့်ထိန်းခြင်း )
“ကာယကံလွန်ကျူးမှု ဒုစရိုက်၊ ၀စီကံ လွန်ကျူးမှုဒုစရိုက် မဖြစ်ရအောင် ကိုယ်အမူအရာနဲ့ စိတ်အမူအရာကို ထိန်းသိမ်းတာတဲ့ စည်းကမ်းဟာ သီလပဲဖြစ်ပါတယ်… “
“ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ လူတို့၏ခြေထောက်သာဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်ဘ၀၊ ဘယ်အနေအထား ဘယ်ပန်းတိုင် ဘာနဲ့သွားမလည်းဆိုရင် အကျင့်နဲ့ သွားရပါမည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ပြည့်စုံလျှင် ခရီးလမ်းမှန်ကို ဖြောင့်ဖြောင့် သွားနိုင်ပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားကုန်သောရင် ဘယ်လမ်းမှ သွားလို့မရပဲ…လမ်းခုလတ် အကုန်ရပ်ပါသည်။” ဟု မိမိကိုယ်ကျင့်တရားကို ထိန်းသိမ်းရပါမည်။
ကမ္ဘာလောကကြီးတွင် ကိုယ်ကျင့်တရားသီလကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် လူ့လောကကြီးတွင် ဘေးအန္တရယ်များ ကင်းရှင်းစေပါသည်.. ဟု ဟောကြား တော်မူခဲ့သည်။ သို့သော် အဲဒီလမ်းကိုလျှောက်သောလမ်းမှာ ခြေထောက်နှစ်ဘက် ကောင်းသော်လည်း မျက်လုံးမပါသောလမ်း (အကန်းလမ်းလျှောက်သလို) လမ်းမှား မလျှောက်ရအောင်. ခြေထောက်လည်း စုံအောင် မျက်လုံးလည်း ကောင်းဖို့ လိုပါသည်။ လူဘ၀အတွက် မရှိမဖြစ်ဟာ ခြေထောက်နှစ်ခု(အကျင့်သီလ) နှင့် မျက်စိနှလုံး(ပညာ) ဖြစ်ပါကြောင်း သီလနှင့်ပညာ အပြန်အလှန်မေးပြီး အချင်းချင်း တောက်ပြောင်အောင် ဘ၀ကိုမြှင့်တင်ဖို့လိုပါသည်။ ဘ၀ရဲ့ အရင်းအနှီးဟာ သီလနှင့် ပညာ နှစ်ခုသာဖြစ်ပါကြောင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းဟောကြားခဲ့ပါသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ အဆုံးအမခံယူပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးနေသော ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များ အတွက် မှတ်သားစရာ အချက်များကိုလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ စကား၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့် ညီညွတ်အောင်… လိုအပ်တဲ့ အချက် များကိုသိအောင် လည်း တရားတော်များတွင် ထည့်သွင်းဟောကြားတော် မူခဲ့ပါသည်မှာ တပည့်တော် တို့အတွက် အလွန် တန်ဖိုးရှိလှပါသည်။
တုနှိုင်းမရသော ဆရာတော်ကြီး၏ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဂုဏ်နှင့် သာသာနာအပေါ်တွင် ထားသည့် မေတ္တာ၊ စေတနာတို့အား တပည့်တော် ဒီစာမူဖြင့် ရေးသားပူဇော်ပါတယ်ဘုရား။ ဆရာတော်ကြီး ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် သာသနာ့ပြုလုပ်ငန်းများနှင့် တပည့်တော်တို့အား တရားဓမ္မများကို ဆက်လက်ပေး စွမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်း ပူဇော်ကန်တော့ပါတယ် ဘုရား ။
သီတဂူဆရာတော်ကြီး ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ ဘုရား။
တပည့်တော်တို့ ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်မှ သာသနာတော်အတွက် အားကိုးဖြစ်တော်မူသော သီတဂူဆရာတော်ကြီးမွေးနေ့ ပူဇာအတွက် ရေးသားပူဇော်ခွင့်ပေးသော ဘုန်းဘုန်း အရှင်ကောဝိဒသိရီ (သီတဂူစတား) အား အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, March 17, 20133comments:
(၃၀) ကြိမ်မြောက် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်ခရိုင်လုံးဆိုင်ရာ
ရွှေကျင်နိကာယ ၀ိနယ ဓမ္မစာဖြေ စာပြန်ပွဲတော်ကြီး
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, February 02, 2013 1 comment:
ကိုယ့်ကိုယ် ကို လူလားမြောက်ပြီလို့ ကြွေးကြော်တာ
မိသားစု ဘ၀ကို ရကြမှာပေါ့။
ရေးသားသူ poemflower at Wednesday, January 16, 20136comments:
တတိယအရွယ်သို့ရောက်သူတို့ ဘယ်လို ဘယ်ဘ၀ အနေနည်းနဲ့ ပြုမူ နေထိုင် ကျင့်ကြံကြရမလဲဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်... အထူးသဖြင့် တတိယအရွယ်ရဲ့ အဆုံးပိုင်းကို ရောက်နေကြတဲ့ အသက် ၇၀၊ ၇၀ ကျော်တွေ ဖြစ်တဲ့ အရွယ်တွေမှာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ အကုသိုလ်ကင်းအောင်နေဖို့၊ ပြီးတော့ နှလုံးသွင်း မှန်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သားသမီး ၊ မြေးများကို ချစ်ရာမှာလည်း အတိုင်းအတာ ၊ အချိန်အခါနဲ့ ဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပြီး ချစ်တတ်ဖို့ပါပဲ။
နှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့ နေသွားနိုင်ဖို့ ကတော့ သတိထား ဆင်ခြင်ရမယ့်အချက်အလက်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ တတိယအရွယ်မှာ မနေတတ်၊ မထိုင်တတ် ရင် ငယ်ရွယ်သူတွေ က အရိုအသေတန်ပြီး စိတ်အားငယ်စရာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် သာသနာ့ အောင်မြေ စာသင်တိုက်က တိုက်အုပ် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ဇယံဝံသ ပေးဝေ လှူဒါန်းတဲ့ တတိယအရွယ်သို့ ရောက်လျှင် ကျင့်ကြံရမည့်၊ ဂရုစိုက်ရမည့် အချက်များကို မျှဝေပေး လိုက်ပါရစေ။
၁။ စကားများများပြောခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရပါမည်။
၂။ အနီးပတ်ဝန်းကျင်များ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စဟူသမျှတွင် မလိုအပ်ဘဲ ပါဝင်ပတ်သတ်မှု မပြုရန် သတိပြုရပါမည်။
၃။ ငယ်ရွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထပ်တလဲလဲ မပြောမိစေရန် သတိထားရပါမည်။
၄။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများက ယင်းတို့၏ ဒုက္ခဝေဒနာ ခံစားမှုများကို မိမိထံ လာရောက်ပြောပြသောအခါ စိတ်ကောင်း၊ စေတနာကောင်းထားပြီး သည်းခံ နားထောင်နိုင်ရပါမည်။
၅။ မိမိ၏ ဝေဒနာခံစားချက်များကို သူတစ်ပါးအား ပြောပြလိုစိတ် တဖွားဖွား ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ချုပ်တည်းနိုင်သူ ဖြစ်ရပါမည်။
၆။ ငါအသက်ကြီးပြီ၊ အတွေ့အကြုံများပြီ၊ မမှားနိုင်ဟူသော အယူအဆကို ဖယ်ထားပြီး ငါလည်း မှားနိုင်တာပဲ ဟူသော အယူအဆကို လက်ခံနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
၇။ မိမိသည် သူတော်စင် တစ်ယောက်ကဲ့သို့ စိတ်ဓာတ် မပြည့်ဝနိုင်သော်လည်း အများစုက လက်ခံနိုင်သည့် အတိုင်းအတာထိ သဘောထားကြီးသူ ၊ မြင့်မြတ်သူ ဖြစ်နိုရပါမည်။
၈။ ဆက်ဆံရေးတွင် ဆရာလုပ်သူ ၊ သြဇာပေးသူ မဖြစ်စေလိုပါ။ တတ်နိုင်သည့် အပိုင်းမှ ပါဝင်ကူညီသူ ဖြစ်ရပါမည်။
၉။ မိမိ၏ အတွေ့အကြုံ ပညာမှ ရရှိလာသော ဘ၀သင်ခန်းစာများကို အချည်းအနှီးမဖြစ်ရလေအောင် ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ရပါမည်။
၁၀။ မိမိ၏ နောက်ဆုံးအရွယ်ကို ကလျာဏမိတ္တ မိတ်ဆွေများကြားတွင် ခိုလှုံရပါ၏။
ရေးသားသူ juno at Thursday, December 27, 20123comments:
ရေးသားသူ poemflower at Friday, November 30, 20123comments: